Fri, Jul 10, 2020 at 11:49am
शनिबार, भाद्र ७, २०७६ साल
नयाँ दिल्ली, ७ भदौ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई संयुक्त अरब ईमिरेट्स (युएई) को सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘अर्डर अफ जायेद’ बाट शनिबार सम्मानित गरिएको छ । यो सम्मान पाउने उहाँ भारतका पहिलो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । युएईमा उच्चस्तरीय भेटवार्तापछि शनिबार उहाँलाई उक्त सम्मानले सम्मानित गरिएको थियो । यो सम्मान विभिन्न मुलुकका राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरुलाई युएई सरकारले प्रदान गर्ने प्रतिष्ठित सम्मान हो..
श्रीलङ्कामा लगाइएको संकटकाल हट्यो
कोलम्बो, ६ भदौ श्रीलङ्काका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले देशमा लगाइएको सङ्कटकाल अन्त्य भएको श्रीलङ्काका सञ्चारमाध्यमहरूले रक्षा मन्त्री जनरल सान्था कोटेगोडालाई उद्धृत गरी उल्लेख गरेका छन् । गत अप्रिल २१ पछि लगाइएको संकटकाल चार महिनापछि हटाइएको उहाँले शुक्रबार बताउनुभएको हो । आतङ्कवादीहरूले गरेको आक्रमणमा परी दर्जनौको मृत्यु भएको घटनापछि श्रीलङ्कामा सङ्कटकाल लागू गरिएको थियो । यसअघि अप्रिल २२ देखि हरेक महिनाको २२ तारिखका दिन सङ्कटकालको..
सार्कलाई सक्रिय बनाउन माग
मंगलवार, भाद्र ३, २०७६ साल
काठमाडौँ, ३ भदौ मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले भारत र पाकिस्तानबीच सीमा क्षेत्रमा गोलाबारी र तनाव बढिरहेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै शान्ति स्थापना गर्न माग गरेको छ । समाजले आज काठमाडाँैस्थित भारतीय र पाकिस्तानी राजदूतावास अगाडि एकसाथ धर्ना एवम प्रदर्शन गरी ‘युद्ध निषेधः शान्ति विशेष’ अभियान सञ्चालन गरेको हो । समाजले भारत र पाकिस्तानलाई युद्धको सम्भावनालाई खारेज गर्न र दुई देशबीच वार्ता अघि..
वासिङ्टन, ३ भदौ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले काश्मिर विवादबारे भारत र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीसँग छुट्टा छुट्टै कुराकानी गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटर मार्फत् फोनमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीसँग आफूले कुरा गरेको बताउनुभएको छ । उहाँले ट्वीटमा भन्नुभएको छ, “मैले मेरा दुई असल साथी भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानसँग कुराकानी गरेको छु ।” व्यापार, रणनीतिक साझेदारी, भारत र..
पाकिस्तानी सेनाको गोली लागेर गाेरखा सैनिककाे मृत्यु
आईतवार, भाद्र १, २०७६ साल
नयाँदिल्ली, १ भदौ । पाकिस्तानी सेनाको गोली प्रहारबाट एकजना नेपाली मूलका भारतीय सेनाको मृत्यु भएको छ । जम्मुक–कश्मीरको राजौरीस्थित शनिबार बिहानको घटनामा भारतीय गाेरखा सैनिकका लेस नायक सन्दीप थापाको मृत्यु भएको बताइएको हो । भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार मृतक थापा देहरादुनका हुन् । जवाफी फायरिङ स्वरुप भारतीय सेनाले पाकिस्तानी सेनाको क्याम्प ध्वस्त बनाएको पनि बताइएको छ ।..
थिम्पु, १ साउन । भुटानको दुई दिने औपचारिक भ्रमणमा रहनुभएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आइतबार त्यहाँका मुख्य विपक्षी पार्टीका नेता डा पेमा ग्याम्त्सोसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयका अनुसार दुबै नेताबीच भारत–भुटानबीचको द्वीपक्षीय सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने विषयमा विचार विमर्श भएको थियो । डा पेमा भुटानको राष्ट्रिय सभामा मुख्य विपक्षी दलका नेता हुनुहुन्छ । आइतबार नै रोयल युनिभर्सिटी भुटानमा आयोजित समारोहमा..
पूर्व वित्‍तमन्त्री तथा भाजपाका वरिष्ठ नेता अरुण जेटलीको अवस्था चिन्ताजनक
काठमाडौँ, ३२ साउन दिल्‍ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्‍थान (एम्‍स) अस्पतालमा उपचाररत भारतका पूर्व वित्‍तमन्त्री तथा भारतीय जनता पार्टीका वरिष्ठ नेता अरुण जेटलीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बनेको छ । अरुण जेटलीलाई भेट्न मोदी सरकारका सबै मन्त्री केहीबेरमा अस्पताल पुग्दैछन् । केन्द्रीय राज्यमन्त्री जितेन्द्र सिंहले शनिबार बिहान एम्‍स पुगेर उनको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिएका थिए । बिहारका मुख्यमन्त्री नीतीश कुमार पनि आजै अरुण जेटलीलाई..
कश्मिरका गभर्नरलाई राहुलको कडा जवाफ, 'यात्रा गर्ने विमान होइन, स्वतन्त्रता देउ'
मंगलवार, श्रावन २८, २०७६ साल
नयाँ दिल्ली, २८ साउन जम्मू कश्मिरका गभर्नर सत्यपाल मलिकले केही दिन अघि राहुललाई कश्मिरमा हिंसा भएको बारे बोल्नु अघि कश्मिरमा आउन भन्दै चाहिए विमानको व्यवस्था गरिदिने बताएका थिए । तर, भारतीय कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीले आफूलाई कश्मिरमा जना विमानको नभइ त्यहाँ यात्रा गर्ने स्वतन्त्रता आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले भनेका थिए,' मैले राहुल गान्धीलाई यहाँ आउन निमन्त्रणा गरेको छु। यहाँको अवस्था अवलोकन..
बाढीले भारतमा दश लाख विस्थापित, मृतकको संख्या १ सय ८४ पुग्यो
सोमबार, श्रावन २७, २०७६ साल
नयाँ दिल्ली, २७ साउन भारतमा अघिल्लो हप्तादेखि परेको बर्षासँगै आएको बाढीमा परी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १८४ पुगेको छ । सरकारी अधिकारीहरुले सोमबारसम्ममा मृत्यु हुनेको संख्या बढेर १८४ पुगेको पुष्टि गरेका हुन् । उनीहरुले बाढीका कारण दश लाख विस्थापित भएको पनि बताएका छन् । देशको दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने केरला राज्यमा गत हप्ता तीन दिनसम्म ठूलो बर्षा भएपछि बाढीले धनजनको क्षति गरेको हो । “यहाँ कम्तीमा..
कस्मिर घटना लगत्तै भारत–पाकिस्तानका विदेशमन्त्री बेइजिङ
काठमाडौं, २७ साउन । नेपाल आउनुअघि भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकर तीन दिने भ्रमणका लागि आइतबार चीन पुगेका छन् । पाकिस्तानका विदेशमन्त्रीले चीन भ्रमण पूरा गरी इस्लामावाद फर्किएको दोस्रो दिन भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर बेइजिङ पुगेका हुन् । पाकिस्तानी विदेशमन्त्री शाह महोम्मद कुरेसी अगस्त ९ मा बेइजिङ पुगे । उनले त्यही दिन चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ वीसँग भेटवार्ता गरे । इस्लामावाद फर्किनु अघि उनले ट्विट गर्दै..
भारतीय कांग्रेसको अध्यक्षमा फेरी सोनिया गान्धी
आईतवार, श्रावन २६, २०७६ साल
नयाँदिल्ली, २६ साउन भारतीय कंग्रेसको अध्यक्षबाट राहुल गान्धीले राजीनामा दिएपछि फेरी उनकै आमा एवं पूर्वअध्यक्षसमेत रहेकी सोनिया गान्धीलाई चयन गरिएको छ । सोनियालाई अन्तरिम अध्यक्षको रुपमा उनलाई पार्टीले जिम्मा दिएको हो । पार्टीको कार्यकारी समितिको निर्णय अनुसार उनलाई अध्यक्षमा चयन गरिएको विज्ञप्तिमार्फत जनाइएको छ ।..
भारतीय काँग्रेसको नयाँ नेतृत्व कसलाई ? आज हुँदैछ फैसला
काठमाडौं, २५ साउन भारतीय काँग्रेसको नयाँ नेतृत्व कसलाई भन्ने विषयलाई लिएर नयाँ चर्चा तथा परिचर्चा सुरु भएको छ । अब पार्टीको अध्यक्ष को बन्छ ? यो विषय तय गर्नको लागि अहिले कंग्रेस आईको कार्यसमिति बैठक नयाँ दिल्लीमा जारी छ । उक्त बैठकमा राहुल गान्धीले राजीनामा फिर्ता लिन अस्विकार गरिसकेका छन् । तर, उनले पार्टीको सांगाठनिक काममा तल्लिन हुने कुराको प्रतिबद्धता जनाएका छन्..
कर्फ्यू उल्लंघन गर्दै कश्मीरमा प्रदर्शन, सरकारविरुद्द ओर्लिए सोझा सर्वसाधारण !
काठमाडौं, २५ साउन भारत प्रशासित कश्मीरका साथै जम्मूको पुन्छ, राजौरी, डोडा र किश्तवाड इलाकामा सरकारले ६ दिनदेखि धारा १४४ लागू गरेको छ । सरकारले धारा १४४ अनुसार नै रोक लगाइएको बताएपनि अवस्था कर्फ्यू जस्तै छ । सरकारले केही स्थानमा ईदमा प्रतिबन्ध हटाउने बताएको छ । तर विरोध प्रदर्शन भइरहेको स्थानहरुमा कायमै रहनेछ । श्रीनगरको सौरा इलाकामा विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ । सरकारले सानो..
भाजपा नेता एवं भारतका पूर्व वित्त मन्त्री अरुण जेटलीको स्वास्थ्य अवस्था चिन्ताजनक
शुक्रबार, श्रावन २४, २०७६ साल
काठमाडौँ, २४ साउन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का नेता एवं भारतका पूर्व वित्त मन्त्री अरुण जेट्लीको स्वास्थ्य स्वास्थ्य अवस्था चिन्ताजनक भएको बताइएको छ । नरेन्द्र मोदीको पहिलो कार्यकालमा वित्त मन्त्री रहेका जेट्लीलाई दिल्लीस्थित एम्समा भर्ना गरिएको छ । अरुण जेट्लीको स्वास्थ्य स्थिति बुझ्न गृह मन्त्री अमित शाह र लोक सभाका अध्यक्ष ओम विडला एम्स पुगेका छन् । यस्तै अमित शाहपछि प्रधानमन्त्री मोदी पनि..
जम्मू–कश्मिर प्रकरण : भाकपा नेता सीताराम येचुरी र डी राजा पक्राउ
काठमाडौँ, २४ साउन आफ्ना बिरामी नेतालाई भेट्न जाने क्रममा भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी)का सीताराम येचुरी र डी राजालाई गिरफ्तार गरिएको छ । आफ्नो गिरफ्तारीबारे येचुरीले ट्विटमार्फत जानकारी गराएका छन् । येचुरीको पक्राउलाई लिएर भाकपाले भारतीय सरकारबाट गैरकानुनी कदम अघि बढेको भन्दै विरोध गरेको छ । भ्रमण तय गर्नु अघि येचुरी र राजाले जम्मू —कश्मीरका गभर्नर सत्यपाल मलिकलाई छुट्टाछुट्टै पत्र लेख्दा पनि नियतबस आफूहरुलाई..
धारा ३७०को 'टकराव'मा जुध्दै पाकिस्तान, कूटनीतिक सम्बन्ध ‘डाउनग्रेड’ !
एजेन्सी, २३ साउन । पकिस्तानले भारतसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध ‘डाउनग्रेड’ गरिसकेको छ । भारतले जम्मू–कश्मीरलाई विशेष राज्यको दर्जा र स्वायत्तता प्रदान गरेको संविधानको धारा ३७० निष्प्रभावी घोषित गरेसँगै पाकिस्तान रुष्ट देखिएको छ । तनावमा रहँदै आएको भारत–पाकिस्तान सम्बन्धमा यसले गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ । र यसको प्रमाण पनि आइसकेका छन् । पाकिस्तानले भारतसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध सीमित गर्ने तथा द्विपक्षीय व्यापारिक सम्बन्ध तोड्ने घोषणा..
भारतीय उच्च अधिकारी फिर्ता पठाउने र व्यापार स्थगन गर्ने पाकिस्तानको घोषणा
बुधबार, श्रावन २२, २०७६ साल
इस्लामाबाद, २२ साउन पाकिस्तानले आफ्नो देशमा रहेका भारतीय उच्च अधिकारीलाई निकाला गर्ने र भारतसँगको दुई देशीय व्यापार स्थगन गर्ने घोषणा गरेको छ । जम्मू कश्मीर राज्यलाई विशेष दर्जा दिने भारतको संविधानको धारा ३७० भारत सरकारले सोमबार खारेज गरेपछि पाकिस्तानले बुधबार यो घोषणा गरेको हो । “हामीले हाम्रा राजदूतलाई दिल्लीबाट स्वदेश फिर्ता गर्ने छौँ भने उनीहरूका प्रतिनिधि पनि फिर्ता पठाउने छौँ,” पाकिस्तानका विदेश मन्त्री..
संसार छोडेर गईन् सुषमा, BJP को झन्डामा लपेटियो पार्थिव शरीर
नयाँ दिल्ली, २२ साउन पूर्व विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको नयाँ दिल्लीस्थित लोधी रोडमा रहेको विद्युतिय शवदाह गृहमा राजकीय सम्मानका साथ दाहसंस्कार गरिएको छ। स्वराजको पार्थिव शरीरमा उनकी छोरी बाँसुरी स्वराजले दागबत्ती दिएकी थिइन्। लामो समयदेखि अस्वस्थ रहेकी स्वराजलाई मंगलबार बेलुकी ह्दयघात भएपछि दिल्लीस्थित एम्स अस्पताल लगिएको थियो । तर, अस्पतालमा उपचारकै क्रममा उनको मृत्यु भएको थियो। अन्तिम संस्कारमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री अमित शाहलगायत..
प्रखर भाजपा नेत्री एवं पूर्व भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजको निधन
काठमाडौँ, २२ साउन । भारतकी पूर्व विदेशमन्त्री एवं भारतीय जनता पार्टीकी वरिष्ठ नेत्री सुषमा स्वराजको निधन भएको छ। ६७ वर्षको उमेरमा उनको निधन भएको हो । उनलाई मङ्गलबार साँझ दिल्लीस्थित एम्स् अस्पतामा भर्ना गरिएको थियो। स्वराजको निधन कार्डिएक अरेस्टका कारण भएको बताइएको छ। त्यसपछि उनलाई अस्पताल लगिए पनि बचाउन नसकिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। कार्डिएक अरेस्ट भएपछि मानिसको मुटुमा इलेक्ट्रोनिक गडबडी हुने र..
कस्मिर मामिलामा धारा ३७० खारेज गर्न मोदी सरकारले कसरी प्रयोग गर्‍यो धारा ३७० नै ?
मंगलवार, श्रावन २१, २०७६ साल
काठमाडौँ, २१ साउन भारतीय संविधानको धारा ३७० ले जम्मू र कस्मिरलाई विशेष राज्यको मान्यता दिएको थियो जसले केन्द्रीय सरकारले संसदबाट पारित गरेका कानुन लागू गर्न राज्य सरकारको अनुमति लिनुपर्थ्यो। निर्वाचनमा विजयी भएको दुई महिनापछि भाजपा सरकारले सोमवार संसदमा दुई वटा संकल्प प्रस्ताव पेस गर्‍यो । यो संकल्प प्रस्तावले धारा ३७० खारेजमात्र गरेन कस्मिरको विशेष दर्जासमेत खारेज गरिदिएको छ । सरकारले यो संविधान..
कश्मीरको मुद्दा : भारत सरकारको ‘सरप्राइज’ले दक्षिण एसियाली राजनीतिमा नयाँ तरंग !
काठमाडौं, २१ साउन । भारतले कश्मीरको स्वायत्त अधिकार कटौती गरेपछि नै दक्षिण एसियाली राजनीतिमा नयाँ तरंग देखिएको छ । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको नरेन्द्र मोदी सरकारले जम्मू–कश्मीरको स्वायतत्ता समाप्त गरेसँगै विभिन्न प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । नजर बन्दमा राखिएका जम्मू–कश्मीरका नेताहरु महबूबा मुफ्ती, सज्जाद लोन, उमर अब्दुल्लासहितका नेताहरु पक्राउ परेका छन् । यसलाई लिएर पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीले कडा टिप्पणी गरिसके । उनले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई..
जम्मु-कश्मीर अब केन्द्रशासित, आगामी बाटोबारे यसो भन्छन राजनीतिशास्त्री
काठमाडौँ, २१ साउन । जम्मु-कश्मीरका विषयमा भारतीय निर्णय उसको आन्तरिक भए पनि यसले अन्तर्राष्ट्रिय ‘एटेन्सन’ पाइसकेको छ। जम्मु कश्मीर विवादास्पद क्षेत्र रहेको विषय भारत र पाकिस्तान दुवैले स्विकारेका हुन्। भारतले यसलाई दुईपक्षीय रूपमा समाधान गर्ने बताउँदै आएको थियो। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चालेको यो कदम एकपक्षीय छ। यो सफल हुन्छ वा हुँदैन अहिल्यै भन्न गाह्रो छ। कश्मीर आफैंमा संवेदनशील छ। ससाना घटनाले पनि..
भारतले धारा ३ सय ७० खारेज गरेकोमा पाकिस्तानको आपत्ति
इस्लामावाद, २० साउन विवादित जम्मु र काश्मीर प्रदेशलाई छुट्याएर नयाँ प्रदेश बनाउनेगरी भारतले संविधानको धारा ३७० खारेज गरेकोमा पाकिस्तानले आपत्ति जनाएको छ । धारा खारेज गर्ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दको आदेशपछि जम्मु र काश्मीरलाई दिइएको स्वायत्तता पनि खोसिएको भन्दै पाकिस्तानले असहमति राखेको हो । धारा ३७० मा मुस्लिम बाहुल्यता रहेको जम्मु काश्मिरलाई विशेष स्वायत्तता दिने व्यवस्था थियो । पाकिस्तानका विदेश मन्त्री शाह मोहम्मद कुरेशीले..
मोदी सरकारको ऐतिहासिक फैसला, जम्मू-कश्मीरबाट अलग भयो लद्दाख
नयाँ दिल्ली, २० साउन । केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले सोमबार राज्यसभामा अनुच्छेद ३७० हटाउने संकल्प पेश गरेका छन् । योसँगै जम्मू–कश्मीर र लद्दाख अलग–अलग केन्द्र शासित प्रदेश बन्नेछन् । भारत सरकारले जम्मू कश्मिरलाई विशेष राज्यको सूचीबाट हटाउन संसदमा संशोधन विधेयक पेश गरेको छ । गृहमन्त्री अमित शाहले आज राज्य सभामा संविधानको धारा ३७० लाई हटाउने प्रावधानसहितको संकल्प प्रस्ताव पेश गरेका हुन् । धारा..
म्यान भर्सेस वाइल्डमा मोदी, विश्वको १ सय ८० देशमा प्रसारण हुँदै
मंगलवार, श्रावन १४, २०७६ साल
एजेन्सी, १४ साउन डिस्कभरी च्यानलमा प्रसारण हुने ‘म्यान भर्सेस वाइल्ड’ कार्यक्रमको एउटा प्रोमो भिडियो सार्वजनिक भएको छ, जसमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जंगलमा भेटिएका छन् । म्यान भर्सेस वाइल्ड बियर ग्रिल्सले चलाउँछन् । कार्यक्रममा ग्रिल्स सुनसान र डरलाग्दो जंगलमा खतरनाक जनावरहरुसँग देखिन्छन् । अब ग्रिल्ससँगै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि देखिने भएका छन् । भारतीय प्रम मोदी भएको एपिसोड डिस्कबरी च्यानलमा १२..
पाकिस्तानको आवासीय इलाकामा सैनिक विमान खस्यो, १७ को मृत्यु
एजेन्सी, १४ साउन । पाकिस्तानी सेनाको एक विमान मंगलबार बिहान रावलपिन्डीको आवासीय इलाकामा दुर्घटनाग्रस्त भएको छ । दुर्घटनामा पाँच चालक दलसहित १७ को मृत्यु भएको छ । मृतकमध्ये १२ सर्वसाधारण पनि रहेको बताइएको छ भने १२ जना घाइते छन् । प्रशासनको अनुसार आवासीय क्षेत्रमा दुर्घटना भएका कारण थप क्षती भएको बताइएको छ । विमानमा लागेको आगोले थुप्रै घरमा क्षती पुर्याएको छ । पाकिस्तानी..
काश्मिरमा १० हजार थप सैनिक तैनाद, स्थानीय त्रसित
श्रीनगर, भारत, १२ साउन गत साताको अन्त्यमा भारत प्रशासित काश्मिरमा १० हजार भारतीय सैनिक तैनाद गरिएपछि स्थानीय त्रसित बनेका काश्मिरबाट एएफपीलाई प्राप्त सूचनाहरूमा जनाइएको छ । यद्यपि भारतीय अधिकारीले उक्त कदम नियमित तालिका अनुसार भएको जनाइएको छ । भारतले मुसलमान समुदायको बहुमत भएको उक्त हिमाली क्षेत्रमा सन् १९४७ मा भारत र पाकिस्तानबीच भएको विभाजित बनेपछि उक्त क्षेत्रमा करिब पाँच लाख सैनिकलाई सुरक्षार्थ..
दिल्लीकी पूर्वमुख्यमन्त्री शीला दीक्षितको ८१ वर्षमा निधन, मोदी पुगे श्रद्धाञ्जली दिन
काठमाडौं, ४ साउन । भारतको राजधानी दिल्लीमा ३ पटकसम्म मुख्यमन्त्री रहीसकेकी काँग्रेस आई नेतृ शीला दीक्षितको ८१ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । पछिल्लो केही समययता मुटु सम्बन्धि समस्याले ग्रसित उनको दिल्लीस्थित फोर्टिस् अस्पतालमा निधन भएको हो । सन् १९९८ देखि २०१३ सालसम्म लगातार डेढ दशकसम्म दीक्षित दिल्लीको मुख्यमन्त्री रहिन् । त्यस्तै उनी सन् २०१४ मा केरल राज्यको राज्यपाल समेत बनिन् । सन्..
आक्रमण–प्रत्याक्रमण : अफगानिस्तानमा २४ तालिबान विद्रोही मारिए
कान्दहार, ४ साउन : अफगानी सुरक्षा फौजको कारबाहीमा उरुग्जान प्रान्तमा कम्तीमा २४ जना तालिबान लडाकू मारिएको सेनाले जनाएको छ । सेनाले प्रहार गरेको क्षेप्यास्त्रबाट अरु १७ जना लडाकू घाइते भएका छन् । सेनाका प्रवक्ता सेलाबले एक विज्ञप्ति प्रकाशन गरी गोप्य सूचनाका आधारमा सेनाले कारबाही प्रहार गरेको बताउनुभयो । तर वक्तव्यमा उक्त क्षेप्यास्त्र अफगान सेनाले गरेको हो वा नेटो आबद्ध सेनाले गरेको हो..
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीका नवनियुक्त प्राइवेट सेक्रेटरी विवेक कुमार को हुन् ?
काठमाडौं, ३ साउन । भारतीय विदेश सेवा (आइएफएस) का अफिसर विवेक कुमारलाई शुक्रबार प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो निजी सचिवमा नियुक्त गरेसँगै अहिले उनको चर्चा चुलिएको छ । भारतको प्रधानमन्त्रीकारुपमा दोश्रो कार्यकाल चलाइरहेका मोदीले विवेकलाई उक्त पदका लागि उपयुक्त देखे भन्ने विषयले समेत धेरैको ध्यान आकृष्ट गरेको छ । हुन त विवेक यसअघिको मोदीको कार्यकालदेखी नै प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग जोडिएका थिए । यस्तो छ विवेक..
Results 349: You are at page3of 12